Happy Chick, ilay emulator rehetra-amin'ny-iray ho an'ny iOS sy Android | Vaovao IPhone
Juan Colilla | | Vaovao IPhone, Fampiharana iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Ao anaty vintana isika, ny fakana tahaka ny console amin'ny findaintsika dia zavatra mahaliana ny maro ary maro, ary izany dia amin'ny alàlan'ny fitaovana 800 € dia efa afaka nitahiry vola an-jatony euro bebe kokoa isika tamin'ny alàlan'ny filalaovana lalao console toy ny Nintendo DS na PSP eo amboniny, ny console izay efa lany andro ankehitriny, izay manakana ny mpamokatra tsy hahazo vola amin'izany.
na izany aza taorian'ny fahatongavan'ny iOS 9 ary ny fiovana anatiny isan-karazany, nahazo kapoka mafy ny tontolon'ny emulator, ary tsy hoe vao maika sarotra kokoa ny nametraka fampiharana ivelan'ny AppStore fa toa nikasika zavatra antsoina hoe JIT i Apple ary ny emulator toa ny PPSSPP dia nijanona tsy niasa akory na dia nigadra aza. vita.
Na izany aza, niova mangingina izany, ary ireo emulator toa ny PPSSPP dia mbola tsy mandeha amin'ny fomba ofisialy, indraindray tsy mavesatra ny fampiharana ary raha mikatona ity entana ity rehefa manokatra lalao. Etsy ankilany, ireo emulator toa ny NDS4iOS dia nahavita niasa indray tao amin'ny iOS 9, na dia nila ny fanampian'ny tranokala toy ny iEmulators hapetraka tsy misy jailbreak manome torolàlana vaovao ho an'ny mpampiasa (fametrahana miaraka amin'ny profiles).
Amin'izy rehetra dia nisy fangatahana vaovao teraka izay tonga nitaky ny tany rehetra nanjakany, resahiko Tovovavy faly, rindranasa misy anarana tsy manan-tsiny ary kisary izay vao mainka (akoho mampihomehy), na eo aza ny fotoana hanokafanao azy dia hitanao ny fahafaha-manao goavana ananany ary toy ny tsy ahitanao ny fahatongavany dia nanjary safidy tsara indrindra sy tokana ihany io. amin'ny iOS.
Happy Chick dia azo apetraka amin'ny fitaovana tsy misy jailbreak (Mazava ho azy, ny fampiasana ny mombamomba ny mpamorona), raha vantany vao vita io rehefa manokatra azy isika dia hahita izay azo antsoina hoe «Game Store», fa tsy fampiharana dia manome antsika katalaogin'ny lalao amin'ny fiteny maro sy maro karazana , ary izany dia ananantsika maimaim-poana alaina amin'ny Pokémon of GameBoy, amin'ny alàlan'ny lalao Nintendo DS ary na dia ireo an'ny PSP sy Playstation 1 aza.
Ny lalao rehetra dia azo sintonina haingana sy mivantana amin'ny rindrambaiko iray ihany, ary raha vao sintonina dia azo tanterahina in-situ, eny fa na ireo avy amin'ny PSP aza, satria ity fampiharana ity dia mampiasa ampahany amin'ny hafa (ohatra, ho an'ny lalao PSP dia mampiasa ny rafitra PPSSPP, na dia nanao izay vitany aza izy ireo mba tsy hananana olana lehibe amin'ny iOS 9 sy tsy misy ny jailbreak).
1 Ahoana ny fametrahana Chick Happy
2 Fampahalalana lehibe
Ahoana ny fametrahana Chick Happy
Ity ny fizotrany, ary izany no izy zavatra tsy mitovy amin'ny fantatsika matetika izany, satria ao anatin'ny dingana beta i Happy Chick ary takiana amintsika ny manana lakile fidirana, lakile izay homena antsika eo noho eo ary maimaimpoana avy amin'ilay mpamorona mampiasa mpampiasa mandeha ho azy ao amin'ny WeChat.
Misintona izahay WeChat ary misoratra anarana izahay (dingana iray tena haingana sy tsotra, mitovy amin'ny WhatsApp io).
Miditra isika ity tranonkala ity ary manaraka ny torolàlana amin'ny sary izahay hanampiana ny mpampiasa "xiaojigame" ao amin'ny WeChat ary hangataka kaody.
Vantany vao nahazo valiny avy aminao izahay, hiditra tranonkala iray ahafahanay misintona ny emulator, ilay mombamomba izay ahafahantsika mampiasa azy io tsy misy jailbreak ary mahita ny kaody fampandehanana anay:
Ny dingana 1 sy 2 amin'ity tranonkala ity dia tsy maintsy arahana mba hampidinana azy (dingana 1) ary avelao ny fampiasana azy tsy misy jailbreak (Dingana 2, izay hahatafiditra ny fidirana amin'ny Settings, fametrahana profil ary fikitihana ny «fahatokiana«).
Raha maka tahaka ny kaody fampandehanana dia tazomy fotsiny ary alao izy, tadidio fa ny kaody tsirairay dia tsy miankina ary tsy azo afindra, tsy azon'ny fitaovana mihoatra ny iray ampiasaina io
Ankehitriny dia mitoetra ihany ny manokatra ny rindranasa napetraka ary apetaho ny kaody izay efa nadikanay taloha, ity dia hanome antsika fidirana amin'ny katalaogin'ny lalao ary afaka manomboka milalao ilay tadiavintsika isika raha vantany vao misintona.
Ilaina ny manonona zavatra maromaro, hanombohana milaza izany ny fampiharana dia amin'ny beta, izay mety hiafara amin'ny fanakatonana tsindraindray (mbola tsy nitranga tamiko izany) na bibikely hafa mila vahana.
Zava-dehibe ihany koa fa rehefa misintona ny lalao ianao dia ataovy izay hahazoana antoka fa amin'ny marika ambanin'ny lanjan'ilay rakitra MB apetraho ny ESP na EUMidika izany fa amin'ny Espaniôla na Anglisy farafaharatsiny ny lalao, raha tsy izany dia mety hiafara amin'ny lalao amin'ny teny Japoney isika.
Ary farany milaza fa ny fametrahana profil tsy fantatra mihazakazaka eo ambanin'ny andraikitrao, ary na dia tsy hitako aza ny karazana fampandehanana an-tsokosoko ny rafitra, dia marina fa ny fametrahana profil iray dia mety hiteraka risika amin'ny fiarovana sy / na fiainana manokana an'ny fitaovanao, ary mety hiteraka ny fampitana vaovao izany. amin'ny fitaovana sy ny fampiasana azy amin'ny lozisialy tsy nahazoana alalana mandra-pametraka ny rindranasa tsy an'ny App Store tsy misy olana, izay afaka manamora ny fidiran'ny malware amin'ny fitaovantsika.
Ireo ihany no tranga ratsy indrindra, manitrikitrika aho, tsy tokony hisy olana rehefa mampiasa ity mombamomba ity, azonao foana ny manafoana ny fitokisana ary mamafa azy io sy ireo rindranasa rehetra ataon'ny sasany aminy aza, ary raha misy malware napetraka dia io dia hivoaka ao amin'ny lisitry ny rindranasa izay misy ny mombamomba azy eo ambanin'ny Settings / General / Profiles / ProfileX
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Sambatra Chick, ilay emulator All-in-One ho an'ny iOS sy Android izay ho tianao. [Tutorial momba ny fametrahana]
Dulux dia hoy izy:
Tena tsara Juan, misaotra
Mamaly an'i Dulux
Misaotra anao Dulux tamin'ny hevitrao ^^
Rehefa afaka andro maromaro dia tsy miasa intsony izy io. Notsapaina tamina iPhones maro. Aza manelingelina.
Valiny amin'ny quique
Miarahaba anao, misy ampahan'ny fampiharana (ary koa hafatra iray amin'ny fotoana voalohany hanokafanao azy) izay mandrisika anao hanampy «Crash Fix» ho an'ny efijery an-trano, tsy vitako izany satria tiako ho hita hoe mandra-pahoviana maharitra (ary mbola mety amiko io) fa raha sanatria tsy miasa intsony izy dia mila mankany aminy fotsiny.
Nahi dia hoy izy:
Salama! Misaotra betsaka amin'ny input Faly aho tamin'ny emulator, saingy herinandro taorian'ny nametrahana azy dia nijanona tampoka ny asany.
Rehefa manandrana manokatra ny rindranasa aho dia mahazo ity hafatra ity: "orinasa tsy atokisana" novolavolaina nilaza fa tsy mahazo ny fanamafisana ny fahatokisana avy amin'ny iPhone-ko ary tsy mamela ahy hiditra, izay hafahafa satria nomeko azy io fotoana io. Mba hanandramana manamboatra azy dia nandeha tany amin'ny profiles aho ary nanamarina azy indray, saingy tsy manamarina izany ary tsy manome karazana hafatra hafa ho ahy. Azonao atao ve ny manampy ahy manamboatra azy io? Aleoko tsy esorina ilay izy ary ho very ny fandrosoana rehetra (raha azo atao).
Izany ve no hitako ny valinteninao momba ny quique ary tsy fantatro xD
(Tsy manana jailbreak aho)
Valiny tamin'i Nahi
sdsd dia hoy izy:
Tsy hampaninona izany koa ny maneho hevitra momba ny toerana ahazoana ny .ipa hametraka azy mivantana amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Jailbreak. (fa adinonao foana ny momba anay izay nigadra).
Mamaly an'i sdsd
Tsy izany mihitsy ry mpamaky malala, miresaka amin'ny mpankafy jailbreak hafa mahafinaritra ianao 😛 Raha mijery ny tutorial fametrahana ianao dia ho hitanao fa milaza ilay sary hoe "mpisera Jailbreak misintona eto" izay manondro fa ireo mpampiasa jailbreak dia tsy maintsy manaraka ireo làlana ireo, hahazoana ny .ipa fotsiny Mila miditra amin'ilay rohy fampidinana voalaza ao amin'ny WeChat ianao, ary satria manana jailbreak ianao na tsia dia mitaky kaody fampandehanana ilay fangatahana, ny fomba fametrahana azy dia mitovy amin'ny ary tsy misy jailbreak 😀
lazlo losla dia hoy izy:
Ny zazavavy sambatra dia efa nisy nandritra ny taona maro izao ary tsy milamina amin'ny ios, amin'ny andrid dia mandeha tsara ...
Mamaly an'i lazlo losla
Raha raisina ho mpanara-dia mpanaraka ny emulator iPhone aho dia mieritreritra aho fa afaka milaza fa tamin'ny ankamaroan'ny Happy Chick dia efa nisy hatramin'ny 2015, ary raha misy ifandraisany bebe kokoa izao noho izy io dia satria io no hany fampiharana mahavita mihazakazaka lalao PSP amin'ny iOS 9 ary araraoty ny herin'ny puce A9. Ary raha ny fanazavana dia mbola ao anaty beta io, na dia tsy maintsy milaza aza aho fa tsy olana ny fitoniana amin'ny raharaha: S
Azo antoka fa raha jerena ny fepetra fiarovana natolotry ny Apple ao amin'ny iOS 9, dia azo inoana fa ity emulator ity dia hanao tsara kokoa amin'ny terminal Android ...
Danny85 dia hoy izy:
Fa any hoy izy ireo dia misy jailbreak 9.3. Marina izany? Amin'ny alàlan'ny twitter an'ny @teamswizz_ iray
Valiny tamin'i Danny85
Danny85 ratsy, tsy misy tahotra sao diso aho dia holazaiko aminao fa maimbo sandoka ilay profil nolazainao tao amin'ny Twitter, ary raha tsy manana porofo maharesy lahatra izy ireo sy ny fankatoavan'ireo izay efa teo an-toerana nandritra ny fotoana fohy ary mbola mavitrika (hackers toa mihinana ianao, p0sixninja, pod2g, MuscleNerd sy ny hafa) na i Saurik tenany izay manondro ny fiaraha-miasa aminy, tsy tokony hoheverinao ho matotra izy ireo, azo inoana fa mitady mpanaraka, fanomezana, dokam-barotra na vola ratsy indrindra ho takalon'ny lainga, araho izahay iPhone News hahitana amin'ny fotoana mety rehefa navoaka ny jailbreak iOS 9.3 😀
andreco dia hoy izy:
Amin'ny teny sinoa daholo izany…. misy mpitari-tolona hampandeha ny lalao?
Valiny amin'ny andreco
: 'DI tsy mahalala raha efa napetraka tsara fa ny fampiharana dia mivoaka amin'ny teny Anglisy, ary raha manaraka ny torohevitra ao amin'ilay lahatsoratra ianao, tsy misintona afa-tsy ny lalao misy ny marika ESP, EU na EN, ny lalao dia tokony ho amin'ny Espaniola na amin'ny fiteny anglisy farafaharatsiny…
Raha mihazakazaka lalao misintona azy fotsiny, vantany vao alaina dia ho hitanao eo amin'ny faritra afovoan'ny rindranasa, tsindrio ny lalao iray dia hanomboka izany.
Mihazakazaka lalao arcade toa an'i mame ve ity emulator ity?
antakel dia hoy izy:
Rehefa omeny hisintomana izy dia mijanona miandry foana. Misy vahaolana? Manana ny 9.3 sy 6s aho
Mamaly an'i antakel
Hugh dia hoy izy:
Mametraka tsara izy ary milalao milamina amin'ny iPhone 6 plus.
Misy mahay milalao azy ireo miaraka amin'ny mpanara-maso ps4 ???
Valiny tamin'i Hugh
Eny, rehefa afaka 15 minitra dia nanomboka nisintona izy ary adiny roa no nisy teo fa tsy ny ampahafolon'ny fampidinana azy.
Misaotra betsaka ! Ho fantatrao ny fomba fametrahana azy amin'ny teny Anglisy na amin'ny fiteny tandrefana farafaharatsiny, izany dia amin'ny fiteny Japoney.
Misaotra mialoha 🙂
Amin'ny teny sinoa ny zava-drehetra, mandeha tsara ny emulator ao amin'ny mame (nanandrana romana maromaro aho), saingy tsy hitako ny ivon-kevitro, raha amin'ny fiteny sinoa dia saika tsy takatrao ny safidy samihafa,
Salama, tonga lafatra amiko izy io, ny findaiko ihany no ampidiriko voalohany ary avy eo amina namako ary azony amin'ny fiteny japoney na sinoa ny menus, misy mahalala ve raha azo ovaina?
@diego_nrg dia hoy izy:
Tiako izany! Misaotra tamin'ny fampianarana sy ny fahalalana fa azo apetraka amin'ny iOS9.3 iPhone 6 sy iPad Mini 3, fa amin'ny dingana 3 dia tsara kokoa ny mandika sy mametaka ny kaody amin'ny alàlan'ny fanokafana amin'ny tanana ny fampiharana satria raha manao izany ianao tsy manokatra azy io amin'ny rohy fametrahana safari amin'ny teny sinoa, araka ny eritreritro. Manana iray amin'ny anglisy aho ary ny iray amin'ny teny sinoa, tsara ny manamarika fa mpampiasa fampahavitrihana / wechat 1 io, ka raha manana fitaovana maro ianao dia mamorona kaonty hafa. Mila fantatro fotsiny ny fomba fampiasana ny lavitra Steelseries MFi ahy
Mamaly an'i @diego_nrg
Tsara @diego_nrg !!!
Voamarikao ve raha miasa miaraka amin'ilay sipa Faly ny steelseries anao MFI ??? Mieritreritra ny hividy a aho.
esory eto izy http://iemulators.com/ ary raha miasa ny stellerier MFi
Aitor dia hoy izy:
Napetrako io ary nijanona tsy niasa intsony. Nanandrana nametraka indray aho fa izao dia manome lesoka amin'ny fametrahana. Misy mahalala ve hoe mahazatra io sa ho an'ny beta?
Mamaly an'i Aitor
Havok dia hoy izy:
Tsy mandeha intsony izao =: :( naharitra herinandro mahery kely (izay nahafaly ahy indrindra) ary tampoka tsy nivoha intsony i puumm.
Mamaly an'i Havok
Luis Dunker dia hoy izy:
Fantatrao ny antony tsy avelan'ny wechat hisoratra anarana eto Shily miaraka amina isa natomboka tamin'ny 4 Help️ Fanampiana !!!
Valiny tamin'i Luis Dunker
Darknighr dia hoy izy:
Ny safidy ho an'ireo mpampiasa tsy misy jailbreak dia tsy miseho amiko
Valiny tamin'i Darknighr
Rehefa te-hisintona toa tsy afaka mifandray aho, inona no ataoko?
Marzio dia hoy izy:
Rehefa misy hafatra diso rehefa misokatra izy ireo dia tsy maintsy manova ny datin'ny iPhone ho lasa Jolay 2014 izy ireo ary hamela azy ireo hiditra fa tsy maintsy manao izany isaky ny te hilalao ahy izy ireo, tsy niasa intsony izy io rehefa nanandrana nanokatra azy io, tsy naneho ahy izany na inona na inona, nanidy ahy irery izy
Valiny tamin'i Marzio
Santiago Romero dia hoy izy:
Rehefa mandefa azy ireo ny hafatra IOS dia mamaly izy ireo, chinwong tong Hong Kong fung shicha lica. (Tsy mivoaka toy ny amin'ny sary izany) INONA NO HATAOKO?
Valiny tamin'i Santiago Romero
Salama, naveriko indray ilay lahatsoratra mba hanehoako hevitra momba ny olana iray tsy maintsy ho hitako raha afaka manampy ahy ianao.
Ary ny nametrahako ny App amin'ny fitaovana iOS tsy misy jailbreak.
Mamela ahy hisintona lalao fa miaraka amin'ny FFVII dia mahazo lesoka aho rehefa vita ny fampidinana: "tsy nahomby ny zotra", misy manana vahaolana ve?
Mifanindran-dalana amin'izany, io no lalao tiako indrindra hanahaka ...
Salama daholo! Raha tokony hikorontana be dia be ny misintona azy dia nalefako mivantana tamin'ny Internet izany. Amin'ny android dia tonga lafatra izy io. Amin'ny IPhone dia tsy te-hametraka azy aho noho ny olan'ny fanamarinana. Raha misy manana izany amin'ny IPhone dia lazao anay ny fandehany. fiarahabana
gerardo pabon dia hoy izy:
ay psp sy dc lalao izay miadana fa ny android processeur no mety indrindra amin'ity emulator ity dia manana lenovo k5 aho
Mamaly an'i gerardo pabon
Ahoana no hamafana ireo lalao tsy ataoko intsony na tsy nety tamiko fotsiny
Salama, nametraka ny App aho, saingy ny iphone no manakana azy. Manana iphone 5 manana kinova farany farany amin'ny iOS aho. Mety ho efa tsy misy intsony ve ny App?
Azonao atao ny milalao zazavavy sambatra amin'ny sony ercsson x milalao tiako ny valinteninao misaotra
fernando vasquez dia hoy izy:
Tiako ny mametraka emulator ho an'ny lalao ps2 na azafady ampio izany satria te-hilalao dragon ball shin budokai tenkaishi 3 ary koa hametraka lalao amin'ny Espaniola azafady azafady mba mangataka emulator ho an'ny ps2 aho
Valiny tamin'i Fernando Vasquez
Batman v. Superman: Iza no handresy? efa ao amin'ny App Store
QuickCenter dia mitondra 3D Touch ho an'ny Control Center